I-Apple yethula amamodeli ayi-10 e-Apple Watch nama-AirPod e-Eurasian Economic Commission | Ngivela kwa-mac
I-Apple yethula amamodeli ayi-10 e-Apple Watch nama-AirPod e-Eurasian Economic Commission
Noma iyiphi inkampani efuna ukuthengisa uhlobo oluthile lwedivayisi kufanele iqale idlulise izihlungi zemizimba efanelekile. E-United States yi-FCC, e-Europe yi-Eurasian Economic Commission kanti e-China yi-Teena. Inkampani ezinze eCupertino isanda kwethula imikhiqizo emisha ezokwethulwa yi-Apple emakethe ezinyangeni ezizayo zase-Europe futhi phakathi kwawo singabona amamodeli amabili e-iPhone amasha, ama-headphone angenantambo ngaphansi kwegama elithi AirPods kanye namamodeli we-Apple Watch angafika kwayi-10. Uma kwenzeka noma ngubani eba nokungabaza mayelana nokwethulwa okungenzeka noma cha kwesizukulwane sesibili se-Apple Watch enkulumweni elandelayo ngoSeptemba 7, le mininingwane iyakuqinisekisa.
Njengoba i-Apple Insider ishicilele, kudokhumenti eye yakhipha imininingwane emincane esingayithola, ngaphezu kwegama lamadivayisi nekhodi efanayo. Abokuqala ukufaka phezulu ohlwini yilawa Amahedfoni angenantambo ama-AirPods brand «Apple», okungakhombisa lokho inkampani isivele inama-headphone angenantambo esikhulume ngawo alungile phambilini. Yize kungaba uhla olusha lwamahedfoni we-Beats inkampani evele isungula ngaphansi kwegama layo. Kucaca ngokusobala ukuthi i-3,5 mm jack inezinsuku zayo ezibaliwe, akukaze kube ngcono.
Okulandelayo, sishiya eceleni okusikhombisa umkhiqizo omusha mayelana neBeats, siyathola Uphawu lomuntu siqu oluphathekayo lwe-elektroniki «Apple A1831 [..] (isoftware version 2 yesoftware). Ukungeza ingqikithi yamamodeli we-Apple Watch ayi-10 ezingatholakali okwamanje emakethe. Okugqamayo wukuthi bashaye imakethe ngenguqulo ye-watchOS 2 hhayi eyokugcina ezongena emakethe ezinsukwini ezimbalwa.
Uma siqhubeka nokufunda, siyabona Uhlobo lwe-Smartphones «Apple» imodeli A1778, A1784 (iOS 10 software version 10). Okwamanje ukufakwa kwezinombolo akukaze kusetshenziswe kunoma iyiphi enye imodeli ye-Apple, kunjalo impela kubhekiswa kumamodeli amasha we-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus, okuzoqinisekisa ukuthi ekugcineni ngeke ibe khona imodeli yePro njengoba bekuke kwaba namahemuhemu kwezinye izikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » I-Apple yethula amamodeli ayi-10 e-Apple Watch nama-AirPod e-Eurasian Economic Commission
Yini efihlekile emfanekisweni wesimemo seKeynote ngoSepthemba 7?
Theappstore, thola izinhlelo zokusebenza ze-Mac, i-iPhone noma i-iPad ngqo